နူးညံ့တဲ့ မျက်ဝန်းလေးတွေအတွက် Maybelline Snapscara! | CosmeticMyanmar
Home » Article » နူးညံ့တဲ့ မျက်ဝန်းလေးတွေအတွက် Maybelline Snapscara!
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်။ ဒီနေ့မှာတော့ နူးညံ့တဲ့မျက်ဝန်းတဝိုက်ကို အရမ်းဖိပြီး ဖျက်စရာမလိုတဲ့ Maybelline ရဲ့ Snapscara လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီ Mascara အသစ်လေးဟာ Maybelline ရဲ့ ပထမဆုံး ဖယောင်းမပါတဲ့ Mascara အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ မျက်တောင်မွှေးတမျှင်ချင်းစီအထိ ထူထူထည်းထည်းလေးဖြစ်စေပြီး ကော့ညွန့်တဲ့မျက်ဝန်းလေးကို ဖန်တီးပေးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Sensitive Eyes တွေအတွက်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် မျက်ဝန်းတဝိုက် ထိခိုက်မှာကို စိုးရိမ်စရာမလိုတော့ပါဘူး။
ဒါ့အပြင် Cotton Pad အပေါ် ရေနွေးနွေးလေးအသုံးပြုပြီး အလွယ်တကူ သန့်စင်လို့ရတဲ့ Easy-On, Easy-Off Snapscara လေးပါ။ မျက်ကပ်မှန်တပ်တဲ့ Beauties တွေ စိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်နော်။ မသန့်စင်မချင်း တနေကုန်လှပတဲ့ မျက်ဝန်းလေးကို ဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။
အသုံးပြုတဲ့အခါ ပုံမှန်အတိုင်း အတွင်းမှအပြင်သို့ ဆွဲပေးပြီး အထူပမာဏကိုတော့ စိတ်တိုင်းကျသည်အထိ ထပ်ခါထပ်ခါ အသုံးပြုပေးရပါမယ်။ ပြန်လည် ဖျက်လိုတဲ့အခါမှာတော့ Cotton Pad ကိုရေနွေးနွေးလေးနဲ့ အသုံးပြုပြီး ဒါမှမဟုတ် Remover တခုခုနဲ့ ညင်သာစွာ ပွတ်တိုက်သန့်စင်ပေးရုံပါပဲ။ တခြား Mascara တွေလို အရမ်း ဖိပြီး ဖျက်စရာမလိုတဲ့အတွက်ကြောင့် မျက်ခွံနာကျင်ပြီး စပ်တာတွေ မခံစားရစေပါဘူး။
အရောင်အားဖြင့် Pitch Black, Ultra Violet, Black Cherry, Deja Blue ဆိုပြီး ၄ ရောင်ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအားဖြင့် 8$ သာကျသင့်ပြီး ဝယ်ယူရရှိလိုပါက Maybelline Counter တိုင်းမှာဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။